Sida a adduunka aqoonsan yahay xal tamar smart bixiyaha iyo soo saaraha module qoraxda, Prostar waxaa ka go'an in ay ganacsi la wadaago shaqaalaha iyo guulaha la-hawlgalayaasha la wadaago. At Prostar Solar, qiimaha ay maamulaan xiriirada aan la macaamiisheena iyo mid kasta oo kale. Waxay awood oo dhan shaqaalaha adduunka oo dhan, in nooc kasta oo shaqo, si ay u fahmaan kuwa aan nahay oo shirkad ahaan, waxa aan u istaagi, iyo ugu muhiimsan, sida in shuqulka sameeyey. Qiyamka qoran yihiin in lagu dhiirrigeliyo iyo hage, maxaa yeelay, sida aan u gaaraan guul arrimaha sida ugu badan waxa aan gaaro. Waxaanu ku dhiiri labada shaqaalaha iyo la-hawlgalayaasha our si loo kobciyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka qeyb qaadatay horumarinta tamar nadiif ah oo dheeraad ah oo la awoodi karo.
Ku rid Macaamiisha First
• Waxaan gelin macaamiisha ee xarunta of go'aan kasta oo aynu samayno
• Waxaan la abuuro xal fudud iyo xarrago leh iyo isdhexgalka
• Waxaan fileynaa caqabadaha iyo iyaga muuqan xalliyaan
Si wada jir ah ku guuleysan
• Waxaan la shaqeeyaan guud ahaan hawlaha, maxaa yeelay, wada shaqeeya edbiyey xal fiican
• Waxaan dhiso wadaqabsi xoog badan gudaha iyo dibadda
• Waxaan xooga saaraan wixii la faham la wadaago ee istaraatijiyad iyo gool Prostar Solar ee
Lead go'aano kama
• Waxaan awood go'aan-qaadasho smart iyo taageero go'aamada waxaan ka dhigi
• Waxaanu ku dhiiri khatar iyo ka guul iyo failure labada bartaan
• Waxaan dhisi aaminaad, kalsooni iyo decisiveness heer kasta
• Waxaan nahay tenacious ku saabsan helida hab fiican iyo hagaajinta maalin kasta
• Waxaan heerka warshadaha iyo si joogto ah kor birta
• Waxaa naga go'an inaan waxbarasho degdeg ah, oo aan ku dhaqmaan-celinta wax dhiska iyo doodda si aad u hesho xal wanaagsan
Ha Wax Xuquuqda
• Waxaan had iyo jeer la kulmaan aan dadaalkeena aan ku macaamiisheena, saamiyada iyo midba midka kale
• Waxaan horyaalka heerka ugu sareeya ee anshaxa, nabadgelyada, tayada iyo joogtaynta
• Waxaan qaadaan masuuliyadda shakhsi ahaaneed ee horumarinta caalamka iyo bulshada, taas oo aan ku shaqeeyaan
Faaido jidka A Sustainable
Waxaan keeni our ganacsiga guusha iyo celinta saamiyada ku keeno iyada oo aad u raad-aragga shirkadda, dayactirka kaga badiyeen / guuleysan xiriir la-hawlgalayaasha ganacsiga, iyo kor u qaadista qiimaha ay macaamiisha.
Share Success la Shaqaalaha
Waxaan si adag u aaminsan yihiin in guusha sida ganacsi si dhow waxay ku xiran tahay tayada, xirfadaha, iyo aqoonta dadka oo awood u leh inay u shaqeeyaan koox ahaan si adag isku dhafan. Waxaan ixtiraamaan shaqada dadka, waxaan ilaaliyo faa'iidooyinka shaqaalaha ', waxaan ku dhiiri shaqaalaha in ay u furan tahay caqabadaha iyo abuurista iyo in la siiyo taageero xoog leh si ay u caawiyaan hirgeliyaan fikradaha wax dhisid ah. Laga soo bilaabo labada daryeelka iyo hab xirfado, Prostar Solar qaybsada koritaanka ganacsiga iyo guulaha kooxaha bulshada caalamiga ah ay.